सबैलाई थाह अमेरिका कोलम्बस पत्ता गल्ति। उहाँले भारत रवाना, तर अलिकति छुट्यो। तर सबैलाई त्यो फिर्ता जलयात्रा थियो किन थाह छ। सारा कुरा मसला थियो। तिनीहरूले भारत देखि समुद्र द्वारा लामो लगे, र तिनीहरूले एक प्रिमियम मा मूल्यवान थिए। त्यसैले मौका सबभन्दा छोटो बाटो फेला पार्न र धेरै सजिला हुनेछ यातायात मा सुरक्षित गर्न। युरोप मा मनपर्ने मसला त्यसपछि मरिच र थिए जायफल। विशेष गरी ओखर। किनभने यसको स्वाद र गन्ध धेरै व्यञ्जन मा थपियो। सोही, यो नट को नाम र ल्याटिन "सुगन्धित" बाट अनुवाद गरिएको छ। धेरै कह शीर्षक। पकाउने गुण को मामला मा यो आकर्षक साथै, र यो अरूको पूर्णाङ्क छ।
एक panacea - चिकित्सा, जायफल को दृश्य को बिन्दुबाट। सानो खुराक मा, यो gastritis र अल्सर मा पुन: प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ, सम्पूर्ण शरीर टन। स्मृति लागि धेरै राम्रो, यो निवारक एक क्यान्सर रूपमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। जायफल अक्सर मास्क र क्रीम को एक भाग रूपमा प्रयोग गरिन्छ कस्मेटिक्स मा। तर यस्तो उपचार मुख्य कुरा हो - यो ज्यादा छैन। को समावेश amphetamine कारणले विभ्रम र अन्य लागूपदार्थको सक्छ "आनन्द।"
यस्तो भारत, ब्राजिल, श्रीलंका रूपमा तातो देशहरूमा, यो मसला उत्पादन। खाना पकाउने (वास्तवमा यो एक बीउ छ) मा सामान्य जायफल प्रयोग पनि नट मेस को सट्टा प्रयोग गरिन्छ। बिक्री पुरा पागल, र तिनीहरूलाई को पाउडर रूपमा पाउन सकिन्छ।
युरोप मा, परम्परा खाना जायफल थपियो लगभग पन्ध्र सय वर्ष छ। पौराणिक कथा अनुसार, मध्य युग मा अक्सर मसला रूपमा थपिएको थियो जो कीमा बनाएको मासु, को patties, उनि लगभग खाने को नालायक भए गरे। मुख्य कुरा थियो - यो मसला रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने घर, धनी छ भनेर देखाउन। खुसीको कुरा, आज यो परम्परा छैन संरक्षित छ, र मसाले उपाय थपियो। यो विशेष गरी जायफल सामना महत्त्वपूर्ण छ। एक भाग एक ग्राम को एक-दशौं भन्दा कुनै लागि खाता हुनुपर्छ।
अब जायफल प्रयोग कुनै पनि व्यञ्जन मा सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा? वस्तुतः सबैतिर! कारण peculiar गंध, यो मासु व्यञ्जन, माछा, तरकारी, च्याउ यसको आवेदन फेला छ। धूम्रपान मासु, sausages, समर्थित खाद्य पदार्थ, सस अक्सर यो मसला प्रयोग तयार छन्। तिनीहरूले स्वाद पेस्ट्री, पेय, हो ककटेल, दुग्ध यसलाई जहाँ यो प्रयोग छैन भन्न गाह्रो छ व्यञ्जन, सस ...। त्यसैले लगभग तपाईं भान्सा मा खाना पकाउन कुनै पनि पकवान, यसको गन्ध संग सजाया गर्न सकिन्छ।
यहाँ केही सजिलो र रोचक व्यञ्जनहरु छन्।
दही संग जायफल
मरिच, जायफल, मरिच, नुन - - स्वाद, साग, प्याज र तुलसी को केही sprigs उहाँलाई लागि, हामी बोसो दही र जैतून मेयोनेज, मसला को 40 ग्राम आवश्यक छ।
दही संग मेयोनेज बिट कटा जडीबुटी र जमीन मसला थप्न। जायफल सस दही संग तयार पारे। तपाईंलाई यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कुखुरा, को व्यञ्जन माछा वा पास्ता। को मेयोनेज र कम बोसो दही, एक आहार मा पनि बसिरहेका भने, तपाईं आफैलाई यो सस गर्न व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ। दही जायफल अपेक्षाकृत सानो, र यसैले एक पकवान मा लोखर्के, सक्रिय मांसपेशी वृद्धि तपाईं खतरामा छैन। तर यो ट्रेस तत्व, भिटामिन, पशु प्रोटीन र बोसो, र kefir छडी समावेश सामान्य आंत्र काम गर्नेछ। पोषक को एक गोदाम - तेल र बारेमा केही भन्नुहोस्। यो पनि साना बच्चाहरु को आहार गर्न तथापि, पाँच वर्ष पछि थप गर्न सकिन्छ। साथै, यो दही संग आवश्यक जायफल गर्ने कलेजो, पेट, अग्न्याशय, atherosclerosis वा मधुमेह समस्या छ मान्छे प्रस्ताव छैन। सबै बाँकी - आफ्नो स्वास्थ्य गर्न!
दूध वा eggnog संग जायफल
सामाग्री: अन्डा, दूध को 150 ग्राम, रक्सी को 40 ग्राम, चिनी 25 ग्राम, नुन को एक चुटकी, जायफल।
एक मिक्सर, रक्सी, चीनी र नुन संग अन्डा हरायो। दूध थप्नुहोस्। बस जायफल संग छर्कनु सेवा अघि।
भान्सा मा जडीबुटी र मसाले प्रयोग गरेर सामान्य व्यञ्जनहरु नयाँ आकर्षण बनाउन सक्छ। मुख्य नियम ज्यादा छैन। तिनीहरूलाई नुन संग, त्यहाँ राम्रो पकवान बिगार्छ भन्दा कम थप्न छ, बिस्तारै थप्नुहोस्।
हृदय कसरी तयार गर्न, खट्टे क्रीम मा stewed
सबै भन्दा प्रसिद्ध रूसी वकील
अस्थायी टैटू कति पकड? आफ्नो प्रकार र आवेदन तरिका को एक